भारतले दिएको कोरोनाविरुद्धको खाेपकाे ‘साइड इफेक्ट’ सात दिनसम्म देखिन सक्ने - Nepal Samaj
१३ माघ, २०७७नेपाल समाजस्वास्थ्य / शिक्षा, मुख्य समाचार
काठमाडौँ । भोलिदेखि लगाउन थालिने कोरोना भाइरस विरुद्धको ‘कोभिसिल्ड’ खोप तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भएको भन्दै लगाउन चिकित्सक र खोप विज्ञले आग्रह गरेका छन् ।
खोप लगाइसकेपश्चात् जिउ दुख्ने, थकाइ लाग्ने र टाउको दुख्ने समस्या देखिन सक्ने अध्ययनले देखाएका छन् । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले मन्त्रीहरू, सचिवहरू, विभिन्न क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई खोप दिने कार्यक्रम राखेको भए स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सेवाग्राहीलाई खोप लगाउन ढुक्क हुने स्थित सिर्जना हुने बताए ।
उनले भने, ‘नेपालमा आएको कोभिसिल्ड खोप तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिएको छ । खोप लगाउँदा सामान्य साइड इफेक्टका रूपमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने र खोप लगाएको ठाउँमा दुख्ने लगायतका समस्या ५–७ दिनसम्म रहन सक्छ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले खोप लगाएपश्चात् कसैमा साइड इफेक्ट देखिए सरकारले उपचार गर्ने बताए । उनले भने, ‘जोखिमका आधारमा खोप लगाइनेछ । पहिलो चरणमा ४ लाख ३० हजार जना फ्रन्ट लाइनरलाई खोप लगाउने योजना छ ।’
भारत सरकारले उपहारस्वरूप उपलब्ध गराएको खोप बुधवारदेखि लगाउन प्रत्येक प्रदेशमा संयोजक खटाइएको छ ।
नेपाललाई प्राप्त भएको खोप अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एक्स्ट्राजेनिका नामक औषधि उत्पादकले संयुक्त रूपमा विकास गरेको र भारतमा रहेको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको हो । सो खोपको तेस्रो चरणको ट्रायल पनि भइसकेको समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
सोमवारसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या २ लाख ६९ हजार ७८९ पुगेको छ । देशभर हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ हजार २४० जना रहेको छ ।नेपालमा पीसीआर परीक्षण गर्नेको संख्या २० लाख ४८ हजार ११३ पुगेको छ । कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या २ हजार ११ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।